Admin, Author at Taja Khabar - Page2of 7
दाङको घोराहीस्थित एक पानीको तलाउमा डुवेर वेपत्ताको खोजी कार्य जारी रहेको छ । आइतवार साँझ करिव ४ बजेको समयमा गुलरियास्थितमा निर्माण गरिएको कृत्रिम तालमा पौडी खेल्न गएका घोराही १५ का लक्ष्मण डिसी डुवेर वेपत्ता भएका हुन् । उनको खोजीमा…
काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर चिसो बढेको छ । आइतबार उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम ६ दशमलव ६ डिग्रीमा झरेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।तापक्रम घटेकाले उपत्यकामा बढी चिसो महसुस गरिएको छ । यद्यपि अपराह्न भने तापक्रम केही बढी छ । महाशाखाले…
सलमानकोे स्वयंवरमा दुई सुन्दरीको प्रतिस्पर्धा, कसले पहिर्याउँला त सलमानलाई स्वयंवरको माला ? (भिडियो…
सलमानकोे स्वयंवरमा दुई सुन्दरीको प्रतिस्पर्धा, कसले पहिर्याउँला त सलमानलाई स्वयंवरको माला ? (भिडियो सहित) एजेन्सी,१० मंसिर । बलिउडमा सधै विवाहको चर्चा हुने तर विवाह नगरेका बलिउड स्टार सलमान खानले स्वयंवर गरिसकेका छन् । चर्चित रियालीटी शो…
३ करोड नेपालीको लागि खुसिको खबर : यी हुन् महान नेपाली महिला जसले बनाइन् क्यान्सर निको पार्ने घरेलु…
३ करोड नेपालीको लागि खुसिको खबर : यी हुन् महान नेपाली महिला जसले बनाइन् क्यान्सर निको पार्ने घरेलु औषधी ! (हेर्नुहोस भिडियो ) ३ करोड नेपालीको लागि खुसिको खबरको खबर नेपाल बन्यो क्यान्सरसंग लड्ने औषधि एलोपेथिक औषधिको प्रयोगदर बढेपनि…
श्रीमान–श्रीमतीले कहिल्यै नगर्नुहोस् यस्ता कुरा, जुन कुराको फाईदा तेस्रो ब्याक्तीले उठाउन सक्छन्…
बिहे भइसकेका श्रीमानश्रीमतीले आफ्नो वैवाहिक जीवन सन्तुलित राख्नको लागि संधै सचेत हुनुपर्छ । पतिपत्नी बीच कहिलेकाहीँ झगडा त भइहाल्छ तर त्यही झगडाको कुरा अरु तेस्रो व्यक्तिलाई सुनाउँदा त्यसले समस्या सुल्झने भन्दा पनि बिग्रने खतरा बढी हुन्छ ।…
सुतेको बेला हामी जादुगर संसारमा जस्तै विभिन्न सपनाम भुलेका भूलेका हुन्छौँ । कहिले निकै राम्रो सपना देख्छौँ भने कहिले डरलाग्दा । ज्योतिषशास्त्र अनुसार हामीले देख्ने सपनाले त्यसको फल दिन बताउछ। ज्योतिषाचार्य पं प्रफुल्ल भट्टका अनुसार आज…
७ वटा बार मध्ये कुन बार जन्मिएका मान्छे ले कति धन कमाउछन् ? कति सफल हुन्छन ? हेर्नुहोस आफ्नो भाग्यपरिक्षा!७ वटा बार मध्ये कुन बार जन्मिएका मान्छे ले कति धन कमाउछन् ? कति सफल हुन्छन ? हेर्नुहोस आफ्नो भाग्यपरिक्षा! आइतबारको दिन सूर्यको हो…
अर्जेन्टिनाका २३ वर्षीय युवक मौरिसियो ओसोलाले हजुरआमा नाता पर्ने ९१ वर्षीया महिला योलान्दा टोरेससँग बिहे गरेकोमा अहिले कानूनी समस्या आएको छ । खासमा मौरिसियाले योलान्दासँग सन् २०१५ मा बिहे गरेका थिए । अहिले योलान्दाको मृत्यु भइसकेको छ ।…
मेक्सिकोको साल्टिल्लोमा बस्ने ५४ वर्षका रोबर्टो इस्क्विभेल विश्वमा सबैभन्दा लामो लिंग भएका पुरुष हुन् । रोबर्टोको यौनांग झण्डै आधा मिटर लामो छ । उनको लिंग १८.९ इन्च लामो हुनुका साथै ९ सय ग्राम तौलको छ । उनको भिमकाय लिंगको कारण उनको…
दमक(झापा) : बुद्धशान्ति गाउँपालीका २ जयपुरकी २८ वर्षीया पुष्पा गहतराज पोर्तेलले जीवनमा कहिल्यै सोचेकै थिइनन् कि प्रेम पनि यति कठोर हुन्छ भनेर। आफ्नै प्रेम र रोजाई अहिले जीवनकै कठिन बज्रपात बनेर उनीमाथि बज्रिएको छ। उनले २०६६ सालमा स्थानीय…